HyperX Pulsefire Haste, averinay jerena ity totozy filalaovana ultralight | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 01/04/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 26/03/2021 23:35 | General, hevitra
Ny peripheraly dia lasa manan-danja toy ny PC mihitsy raha ny amin'ny finaritra amin'ny lalao video mandritra ny ora maro, io indrindra no mitranga HyperX, marika ekena fa mahafeno ny filan'ny mpilalao indrindra amin'io lafiny io. Amin'ity indray mandeha ity dia te-hitondra anao ny fitsapana farany ny vokatra mifandraika amin'ny filalaovana.
Izahay dia mijery lalina ny HyperX Pulsefire Haste vaovao, totozy filalaovana ultralight izay hahafahanao mahazo ny tsara indrindra amin'ny valiny. Ity karazana totozy ity dia nanjary lamaody teo amin'ireo manam-pahaizana manokana, tena marina ve fa manome valiny tsara izy ireo?
1 Volavola sy fitaovana
HyperX dia mamokatra an'io karazana kojakoja io miaraka amin'ny fitohizana mitohy, amin'ity tranga ity dia manana endrika nentim-paharazana isika, na dia mahavariana aza fa manana perforations am-polony izy mba hanamaivanana ny lanjany araka izay tratra.Vokatr'izany dia manana lanjany tsy misy tariby 59 grama sy tariby 80 grama izahay. Miaraka amina endrika feno boribory sy mahazatra, manana bokotra eo an-tampony izy hanamboarana ny hafainganan'ny fivezivezena, ny bokotra nentim-paharazana roa, ny kodiarana mifanentana ary ny bokotra roa ao amin'ny faritra ankihiben. Ity ny atin'ny fonosana:
Microtec matevina vovoka TTC
Miverina ny PTFE
Misy fehy fametahana fanampiny
Bokotra manontolo: Enina
Vita amin'ny plastika mainty izy io, misy refy amin'ny 124.2 x 32.2 x 66.8 mm ny fitambarany. Marihina fa amin'ny fomba ahoana no hitranga raha tsy izany dia manana isika a RGB LED izay tafiditra amin'ity tranga ity amin'ny kodiarana totozy, ary maivana loatra ve izany, ity karazana pitsopitsony ity dia voafetra hatramin'ny farany ambony indrindra ho an'ny fampiononana lehibe kokoa an'ny fitaovana.
Raha ny momba ny sensor dia ananantsika ao a Pixart PAW3335 miaraka amina vahaolana hatramin'ny 16.000 DPI, azontsika atao ny manamboatra amin'ny alàlan'ny bokotra 400/800/1600 hatramin'ny 3200 DPI. Izany dia manome antsika hafainganam-pandeha tanteraka 450ips miaraka amin'ny haingam-pandeha 40G. Izy io dia miaraka amin'ireo lakileny micro tsy misy vovoka TTC Golden izay manohana tsindry manodidina ny 60 tapitrisa.
Raha ny fahatsiarovana natambatra dia iray ihany ny mombamomba azy, azo alamina amin'ny alàlan'ny fampiharana HyperX azonao sintonina ao ITY FIAINANA ity. Haingam-pandehanana mifidy 1.000 Hz amin'ny alàlan'ny HyperFlex USB Cable miaraka amin'ny teknolojia USB 2.0 mahazatra.
Amin'ity tranga ity dia nanome antsika totozy somary minimalist izy, izay mirehareha amin'ny fahazavana ary toy izany indrindra ny zava-misy. Tonga dia mahazo aina izy ary mahafeno ireo toetra ara-teknika nampanantenaina, mifanaraka tsara amin'ny sandan'ny vola. Mariho fa mahita vidiny 59,99 euro isika amin'ny teboka amidy isan-karazany toa an'i Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » HyperX Pulsefire Haste, averinay jerena ity totozy filalaovana ultralight ity